कार्यान्वयनयोग्य बजेट | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय कार्यान्वयनयोग्य बजेट
पूर्व बजेट छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै यथार्थवादी बजेट ल्याउन र व्यापारघाटा कम हुने गरी बजेट ल्याउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । आफू अर्थमन्त्री भएका बेला बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको अनुभवका आधारमा समस्याको जरो के हो भन्नेमा चाहिँ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको ध्यान पुगेको देखिएन । तर, उनीहरूका अभिव्यक्ति वर्तमान सरकारको विरोधमै सीमित भए । यस्तो प्रतिक्रियाले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ला त ?
यो भएन, त्यो नगर जस्ता कुरा गर्नुभन्दा यो यो काम गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन्छ र हाम्रो यसमा पूर्ण सहमति छ भन्न प्रतिपक्षमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्री र सत्तापक्ष निकट अर्थमन्त्रीले आँट देखाउलान् त ?
बजेटमा यो भएन, यसो नगर्नु, यो मिलेन भन्नेजस्ता प्रतिक्रियाले यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउँदैन । खासमा बजेटमा केके कुरा हुँदा त्यसको कार्यान्वयन राम्ररी हुन्छ अर्थात् विकास बजेट खर्च हुन्छ र विकास निर्माणको लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने व्यावहारिक सुझाव आवश्यक पर्छ । त्यही भएर नै पूर्वबजेट छलफल गर्ने गरिएको हो । कुनकुन कारणले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्नेमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू जानकार हुन्छन् नै । त्यो जानकारीका आधारमा वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई व्यावहारिक सुझाव दिए आगामी बजेट बढी प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सहयोग हुन्छ र देश विकासको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
पार्टीगत पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट नबनाउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सुझाव दिए । यो भनेको सत्तारूढ पार्टीका नेताका नाममा मात्र कार्यक्रम नराखेर अन्य दलका नेताको नाममा पनि भागबन्डा लगाएर कार्यक्रम राख्नुपर्छ भनिएको हो ? सडक बीपी कोइरालाको नाममा बनोस् कि मदन भण्डारीको नाममा अथवा अन्य कुनै नेताको नाममा नै किन नबनोस् । त्यसको उपयोग सबैले गर्छन् । त्यसैले यस्ता कुराभन्दा बजेटको कार्यान्वयन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुनुपर्छ । खर्च अनुसार परिणाम सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसका लागि केके गर्न सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक सुझाव दिएको भए उनीहरूको अनुभव राज्यका लागि काम लाग्थ्यो । विगतको अनुभवले के देखाउँछ भने अध्ययन भइसकेका, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको तथा जग्गा अधिग्रहणको विवाद नभएको योजना छनोट गरे बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन्छ । यस्तो कार्यान्वयनयोग्य आयोजना छनोट गर्दा बजेटको आकार पोहोरपरारको भन्दा सानो बन्छ । प्रतिपक्षमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सुझाव यस्तै व्यावहारिक खालको हुनुपर्थ्यो । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एउटै आवाज भइदिए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । अर्थमन्त्रीलाई आफ्ना दलको सांसदको दबाबबाट बचेर कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन सहयोग मिल्थ्यो । त्यसको फाइदा देशलाई नै हुने हो ।
वास्तवमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई आफ्ना दलका सांसदहरूको दबाब निकै हुन्छ । यस्तोमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले एकै स्वरमा कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन सुझाव दिए अर्थमन्त्रीलाई सानो आकारको बजेट ल्याउन ढाढस मिल्छ । सानो बजेटको अर्थ हो : कार्यान्वयनयोग्य बजेट । बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या आउँछन् । अहिले देशले भोगिरहेको तरलता संकटको एउटा कारण कार्यान्वयन नहुने बजेट पनि हो ।
बजेटको आकार बढेन भने करको दर पनि बढाइरहनु आवश्यक पर्दैन । विद्यमान कर प्रणालीमा रहेका छिद्रहरू टँले मात्रै पनि बजेटका लागि स्रोत पर्याप्त हुन्छ । करको दायरामा नआएका आयका विभिन्न स्रोतहरूलाई करभित्र ल्याउन पनि सानो बजेट बनाउँदा नै सहज हुन्छ । जनतालाई निचोर्ने गरी कर लगाउने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्छ । यस्तो खालको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीले निकै साहस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो साहस उनलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले दिन सक्छन् ।
कार्यान्वययोग्य बजेट नै आर्थिक विकासको आधार हुन सक्छ । प्रतिपक्षले पनि यो तथ्यलाई बुझेर कार्यान्वयनयोग्य बजेटका लागि सहमति दिनु उपयुक्त हुन्छ । यो भएन, त्यो नगर जस्ता कुरा गर्नुभन्दा यो यो काम गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन्छ र हाम्रो यसमा पूर्ण सहमति छ भन्न प्रतिपक्षमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्री र सत्तापक्ष निकट अर्थमन्त्रीले आँट देखाउलान् त ?